Nanao fanangonam-bola handoavana ny onitra fanalam-baraka ho an’ny PM Lee Hsien Loong ireo bilaogera any Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Mpanome fanampiana miisa +4.000 no nandray anjara tamin'ny fanentanana
Voadika ny 09 Mey 2021 5:10 GMT
Bilaogera Roy Ngerng (ankavia) sy Leong Sze Hian (ankavanana). Sary: Facebook
Bilaogera Singapaoreana roa no nahavita nanao fanangonam-bola ho onitra fanalam-baraka ho aloany amin'ny Praiminisitra ao amin'ny firenena Lee Hsien Loong.
Ny 24 martsa lasa teo, meloka tamin'ny resaka fanalam-baraka ny Praiminisitra Lee ilay bilaogera sady mpanolotsaina ara-bola, Leong Sze Hian noho ny fizarana lahatsoratra tao amin'ny Facebook tamin'ny taona 2018, izay nampifandray ny lahatsoratra iray milaza ny naha voaroiroy ny mpitondra Singapaoreana amin'ny raharaha kolikoly iray tao Malezia.
Nesorin'i Leong ilay lahatsoratra saingy mbola nitory azy tamin'ny fanalam-baraka ihany i Lee. Nasain'ny fitsarana nandoa vola mitentina $ 133.000 S$ (100.300 USD) i Leong. Nanosika an'i Leong hanao fanentanana tamin'ny fanangonam-bola izany ka nahombiazana satria voavory tao anatin'ny 11 andro monja.
Nanome aingam-panahy ilay bilaogera namany Roy Ngerng ny fahombiazan'i Leong tamin'ny fanangonam-bola handoavana ny onitra fanalam-baraka ho an'i Lee. Tamin'ny taona 2014, nampangain’ Roy i Lee ho nanodina ny kitapom-bolan'ny Central Provident, tahirim-bola federaly fiarovana ara-tsosialy hitsinjovana ny beantitra. Niala tsiny tamin'ilay bilaoginy i Roy tatỳ aoriana, saingy nandà ny fialan-tsininy i Lee, ary niampanga azy ho nanala baraka.
Tamin'ny 17 Desambra 2015, nandidy an'i Roy handoa vola mitentina S$ 150,000 ( 113,130 dolara) ny Fitsarana Tampony noho ny fahavoazana nahazo an'i Lee. Nifampiraharaha izy mba handoavana ny onitra isam-bolana ary, toa an'i Leong, dia nanao fanentanana fanangonam-bola ka nahatratra ny tanjony tao anatin'ny valo andro monja.
Nanasongadina ny fanenjehana natrehin'ireo mpitsikera ny raharahan'i Leong sy i Roy, anisan'izany ny olom-pirenena tsotra, izay maneho hevitra maningana amin'ny sehatra an-tserasera. Saingy manondro faniriana hiarovana misimisy kokoa ny fahalalahana miteny ny fahombiazana tsy nampoizina tamin'ny fanentanana fanangonam-bola nataon'ireo bilaogera anankiroa.
“Fahagagana tamin'ny Alahadin'ny Paska”
Nahatratra ny tanjony tamin'ny fanangonam-bola i Leong tamin'ny 4 Aprily, ka nahatonga ny fahombiazany nantsoina hoe ilay “fahagagana tamin'ny Alahadin'ny Paska”. Olona maherin'ny 2000 no nanohana ny fanentanany. Nosoratany tao amin'ny Facebook ireto andalana ireto, miresaka momba ny tolona ara-pitsarana natrehany nandritra ny roa taona:
Fizarana Facebook fotsiny no nataoko
Tsy nisy fanamarihana, fizarana tsotra
ary tonga ny tahotra lehibe indrindra tamin'ny faha-65 taonako
Tsy sahy niady aho
Saingy isan'andro miezaka
Mangataka rivotra madio
Ho an'ny rariny sy ny hitsiny
Tsy afa-misaraka ny fahalalahana sy ny fitenenana
Izay mampalahelo fa tena tsy fahita firy eto,
Terena ny mari-boninahitra hitondra
Ny famoretana tsy maintsy ho potehintsika
Na ho lava sy sarotra aza ny toe-draharaha
Mila foanana hatraiza hatraiza ny tahotra
Ka tsy hatahotra ny zanatsika handeha ho ao
Novelominy indray ny fanentanana fanangonam-bola rehefa reny fa nikasa ny hitaky ny fanonerana ny lany tamin'ny fitsarana mitentina 130,000 $ (98.000 USD) i Lee, izay midika fa mila mandoa ny ampahefatry ny iray tapitrisa dolara noho ny fizarana lahatsoratra tao amin'ny Facebook i Leong.
Fanentanana fanangonam-bola ho fifandanana
Very asan'i Roy tao amin'ny hopitaly i rehefa tratran'ilay fitoriana tamin'ny fanalam-baraka. Lasa nankany Taiwan izy rehefa tsy nahita asa. Midika ny fahombiazan'ny fanangonam-bola nataony fa afaka miverina any Singapaoro izy nefa tsy manahy ny ho bankirompitra.
Hatramin'ny herinandro lasa izay, nihevitra aho fa tsy ho afaka ny hody any Singapaoro mihitsy, noho ny tahotra fitoriana fanalam-baraka sy ny fandrahonana ho bankirompitra.
Saingy tamin'ny herinandro teo dia niara-nivory ianareo ary nanampy tamin'ny fanantaterahana ny fiverenako indray. Tena feno fankasitrahana aho.
Olona manodidina ny 2.122 no nandray anjara tamin'ny fanentanana nataon'i Roy ary mbola mitohy hatrany ny fanomezana, na dia efa nahatratra ny tanjony aza izy. Nivoady izy na hamerina ireo fanomezana mihoatra na hanolotra izany ho an'i Leong sy ireo mpanao gazety hafa izay miatrika fiampangana fanalam-baraka ihany koa.
Nolazainy taminay fa midika ny fahombiazana tamin'ny fanentanana fanangonam-bola fa olom-pirenena maro no tsy faly amin'ny fanenjehana ireo mpitsikera sy ny mpikatroka:
Nanao izany noho ny antony maro samihafa ny vahoaka nanatevin-daharana ny hetsika fanangonam-bola, fa ny tena mivaingana dia ny fanirian'izy ireo tsy hahita intsony ireo olona mampiaka-peo na manontany momba ny lohahevitra lehibe ho toriana na hampangaina fotsiny noho ny fanaovany izany.
Kely kokoa ny fandeferana amin'ny hetsika famoretana avy any ambony toa izany, ary hifotitra amin'izy ireo amin'ny farany ny fampiasan'ny governemanta ny fitsarana ho fitaovana [mitohy] ho fanenjehana ara-politika, rehefa hitan'ny olom-pirenena Singapaoreana fa manapim-bava ny adihevitra izy ireo, fa tsy vonona ny hamaha ny olan'ny Singapaoreana.
Rehefa mitombo ny hantsana eo amin'ny Singapaoreana ary mirongatra ny fahantrana dia mila adihevitra momba izany ny vahoaka, ​​ary ny valiny sy ny vahaolana amin'izany ihany koa. Manomboka mahatsapa izy ireo fa mifanohitra amin'ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny resaka mahomby sy vahaolana politika ny fanenjehana ireo mpikatroka, mpanao gazety ary mpikambana ao amin'ny fanoherana, ary vao maika mahatonga azy ireo hahatakatra fa mampihena ny sehatra malalaka hanaovana fitsikerana ny fampiasan'ny governemanta ny fitsarana ho fitaovana mba hampanginana ny tsy fitovian-kevitra.
Nampiany fa azo adika ho toy ny “endrika fifandanana kinendry” iray ny fanangonam-bola enti-manohitra ny tetika henjana ataon'ny governemanta amin'ny olona mitsikera:
Ny hetsika demaokrasia manerana an'i Azia no [mahatonga] ny Singapaoreana [hahatsapa kokoa] fa afaka mitondra fanatsarana ara-tsosialy bebe kokoa ny demaokrasia, ary miha manaiky tsikelikely ny Singapaoreana fa ilaina ny endrika fifaharana ara-tsosialy sasany anoherana ny fahefana mba hahatrarana ny rariny ara-tsosialy. Ny… fandraisana anjara amin'ny hetsika fanangonam-bola no ohatra iray amin'ny fanoherana kinendry iray iadiana amin'ny fomba fanenjehan'ny governemanta ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny resa-bola .
Nampandre an'i Lee sy ny fitsarana ny ekipan'i Roy fa haloany indray mandoa ny ambin'ny onitra.